सामाजिक सञ्जालमा नेपाल बन्दको विरोध, प्रचण्ड–माधव समूहलाई गाली नै गाली - Narayanionline.com
चितवन, माघ २२-
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको नेपाल बन्दलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको छ ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ‘प्रचण्ड’ ट्रेन्डिङ भइरहेको छ । सयौंले यही ट्रेन्डिङलाई उपयोग गर्दै आफ्ना पोस्टहरू सेयर गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गाली गरिरहेका छन् । धेरै समयअघिदेखि नेपाल बन्द गर्ने परिपाटी रोकिरहेको अवस्थामा संसदीय राजनीतिमा क्रियाशिल नेताहरु नै बन्द गरेर सडकमा आएपछि नागरिकले आक्रोश पोखेका छन् ।
चितवनका पत्रकार रमेशकुमार पौडेलले जसले बन्द गर्छ त्यसलाई मनैदेखि घृणा गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका छन् । सडकमा सूर्य चिन्ह बोकेर गरिएको बन्दप्रति उनले आश्चर्य पनि व्यक्त गरेका छन् । उनको स्टाटसमा धेरैले समर्थन गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै अर्का पत्रकार विनोदबाबु रिजालले म बन्द र प्रतिगमनको विरोधी हो भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् ।
चितवनका कवि तथा उपन्यासकार भूपेन्द्र खड्का ‘भूपिन’ ले प्रतिकात्मक ढंगले सम्वादको रुपमा एक दुई जना नेताको सनकले नेपाल बन्द भएको जनाएका छन् । त्यसैगरी अर्का चितवनका प्राध्यापक महेश न्यौपानेले गरिब र श्रमजीवी जनताको पक्षमा राजनीति गर्नेहरुले नै नेपाल बन्द गरेको भन्दै बन्दको विरोध गरेका छन् ।
फेसबुक मात्र नभएर अर्काे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि बन्दको व्यापक विरोध भएको छ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले बिहीबार देशभर आमहड्ताल घोषणा गरेसँगै विभिन्न ठाउँमा ट्याक्सी जलाएको, एम्बुलेन्समाथि तोडफोड गरेको, ठेलाबाट तरकारी फालिदिएको तस्बिरलगायत अन्य गतिविधिहरु मिडियामा आएसँगै ट्वीटरमा ह्यासट्यागसहित ‘प्रचण्ड’को नाम ट्रेन्डिङमा आएको हो ।
‘म नेपाल प्रहरीको कुनै पोस्टमा हुन्थे भने यो अवस्थामा सुट गर्दिन्थे। त्यही भएर म नभएको होला’ डा. शिवाय नामका ट्विटरकर्ताले लेखेका छन्। ट्याक्सी जलाएको, तरकारी फालिदिएको, एम्बुुलेन्स तोडफोडलगायतको तस्बिर राखेर शिवायले ट्वीट गरेका छन् ।
रुटिन अफ नेपाल बन्द नामका ट्वीटरकर्ताले दुई घण्टाअघि एउटा पोष्ट गरेका छन् म। जसमा लेखिएको छ– ‘बिहानको अवस्था काठमाडौंको प्रचण्ड–माधव समूहले घोषणा गरेको आम हड्तालको समयमा सार्वजनिक गाडी एकदमै थोरै कुदेको छ भने निजी बाइकहरू चलिरहेका छन् । सुरक्षा कडाभन्दा कडा छ। अनि आन्दोलन हुने स्थानमा पुलिसले गाडी डाइभर्सन गरिराखेको छ ।’
‘यस आइ लाइक यू सो’ नामका ट्वीटर प्रयोगकर्ताले अब कसले प्रचण्डलाई साँच्चिकै विश्वास गर्दछ? भनेर प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको चर्चा किन धेरै भएको र सबैले प्राथमिकतामा किन राखेको भन्ने विषय चासो रहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडक आन्दोलनमा रहेको प्रचण्ड–माधव पक्ष आन्दोलनमा छ । सो क्रममा गरिएको देशव्यापी आमहड्तालबाट जनताले सास्ती पाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।
बिहीबार बिहानै सामाखुसीमा अज्ञात समूहले एउटा ट्याक्सी जलाएको थियो। ट्याक्सी पूर्ण रुपमा जलेपछि प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपा कार्यकर्ताले जलाएको हुनसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अनेकन टिकाटिप्पणी भएको हो । यता प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त ट्याक्सी आफूहरुले नभएर बन्दको विरोध गर्नेहरुले जलाएको आरोप लगाएका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएकोले पनि बन्द बारेको जनमत बुझ्न यस्ता माध्यमबाट सजिलो भएको छ ।
महासचिव विप्लव चितवनमा, भरतपुर कारागार पुगेर दाईलाई भेटे
पुर्व प्रहरी संगठन चितवनको अध्यक्षमा उद्धव कुमार श्रेष्ठ
विप्लव समूहका नेता बास्तोला भन्छन्ः ‘सरकार बनाउन सहयोग गर्छौ’
बागलुङकी ६५ वर्षीया वृद्धामा कोरोना नभएको पुष्टि
सिक्लेस–कोरी केबुलकार बन्ने
बाह्रबीसे पहिरो : उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता
माडी कुसुमखोलाका चेपाङलाई न्यानो कपडा वितरण
चितवनमा होम आइसोलेसनमा बसेका वृद्धको मृत्यु